PTO SHAFT Mugadziri, Anotengesa, Fekitori - anoderedza, honye anoderedza, honye gearboxes, mapuraneti magiya mabhokisi, ekumhanyisa kudzora, akasiyana, helical giya, sprial bevel magiya, ezvekurima magiya, ekurima maturakita, marori magiya, honye gearbox
Uri kutsvaga sosi yakavimbika yePTO drive system zvikamu? KuHZPT, isu tinopa zvese zvaunoda kuti uwedzere mashandiro etirakita nemidziyo yekurima. Tine 60,000 mativi tsoka yekuparadzira nzvimbo inochengetera dzakasiyana PTO shaft zvikamu kubva kumusoro vagadziri muindastiri. Yedu yakawanda yekuverenga inoita kuti tikwanise kupa izvi zvigadzirwa nemakwikwi mitengo.
Paunenge uchitsvaga kusarudzwa kwedu kwezvikamu zvePTO, iwe unowana zvese kubva kumajoko uye shafeti kusvika kumasystem masystem uye roll roll. Kana iwe usina chokwadi kuti ndechipi chigadzirwa chakanakira nhumbi dzako, ndapota tizivise. Chikwata chedu chine ruzivo chinogona kunongedza iwe munzira kwayo.
Kutungamira kwakabatana Assembly
Indasitiri Dhiraivha Shaft
Trcuk driveline / Transmission shaft yeMarori
Indasitiri Heavy duty universal Shaft (ILP)
PTO SHAFTS MUENZANISO